Iinqwelomoya zaseTel Aviv, eNaples, eOdessa, eKyiv, eDubai naseAmsterdam zisuka ePrague kobu busika
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » isikhululo » Iinqwelomoya zaseTel Aviv, eNaples, eOdessa, eKyiv, eDubai naseAmsterdam zisuka ePrague kobu busika
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zeCzechia Breaking • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
I-Tel Aviv, iNaples, i-Odessa, i-Kyiv, i-Dubai kunye ne-Amsterdam iinqwelomoya zisuka ePrague kobu busika.
Ishedyuli yenqwelomoya yasebusika ka-2021: Uqhagamshelo oluthe ngqo ukusuka kwiSikhululo seenqwelomoya sasePrague ukuya phantse kwiindawo ezili-100 kunye nokwandisa iifrikhwensi kwiindlela ezikhoyo.
Kuya kubakho uqhagamshelo olutsha olunikezelwayo ngexesha lasebusika. IWizz Air iza kubonelela ngenqwelomoya ukusuka ePrague ukuya eRoma, eCatania naseNaples, ngelixa iSmartwings isongeza iinqwelomoya eziya eDubai naseLondon.
Indlela eya eTel Aviv iya kusetyenziswa yi-Israir Airlines, iBlue Bird Airways kunye ne-Arkia Airlines kwixesha lasebusika le-2021.
Kuya kubakho iindlela ezintsha ngokupheleleyo kweli xesha lobusika, ezizezi indlela yasePrague - Odessa, kwiBees Airline, kunye neSkyUp Airlines uqhagamshelo olutsha lwaseKyiv. Iindlela ezintsha zeRyanair ziya kuphucula ukufikelela eWarsaw naseNaples.
NgeCawe esebenzayo, nge-31 kaOkthobha 2021, ishedyuli yenqwelomoya yasebusika iyaqala ukusebenza, ibonelela ngoqhagamshelo oluthe ngqo ukusuka IVáclav Havel kwisikhululo senqwelomoya ePrague ukuya 92 iindawo, kuquka amazwe angaphandle ezifana Kenya, Mexico kunye Dominican Republic. Kuya kubakho iindlela ezintsha ezisebenza phantsi kweshedyuli yenqwelomoya yasebusika, umzekelo, ukuya eTel Aviv, eNaples, eOdessa, eKyiv, eDubai naseAmsterdam. Ukuqaliswa kwemisebenzi yesiseko se-Eurowings kuya kunceda kwakhona ukuqalisa kwakhona kunye nophuhliso olongezelelweyo lokuhamba ngeenqwelomoya.
Ngaphantsi kweshedyuli yendiza yasebusika ka-2021, abathwali bomoya abangama-47 baya kuqhuba iinqwelomoya ezithe ngqo ukusuka/ ukuya Prague. Inkampani yaseJamani iEurowings, ilungu leLufthansa Group, ivula isiseko sayo Isikhululo senqwelomoya sasePrague. I-Airbus A319 yayo emibini iya kukhonza unxibelelwano kwiindawo ezili-13 zaseYurophu, kuquka iCanary Islands kunye neBarcelona. Ryanair uqhagamshelo olucwangcisiweyo olusuka ePrague ukuya kwizixeko ezingama-26, kuquka iindawo ezithandwayo ezifana neLondon, iKrakow neDublin. Iqela leSmartwings liza kuqhuba uqhakamshelwano kwiindawo eziphantse zibe ngama-20 phantsi kweshedyuli yenqwelomoya yasebusika, njengeCanary Islands, Madeira, Hurghada, Paris and Stockholm. Uqhagamshelo oluthe ngqo kwi-charter yexesha elide ukuya kwiindawo ezingaqhelekanga ezifana neMaldives, iPunta Cana, iMombasa, iCancún kunye neZanzibar nazo ziya kufumaneka ukusuka. IVáclav Havel kwisikhululo senqwelomoya ePrague.
Ngaphantsi kweshedyuli ye-2021 yendiza yasebusika, abathwali beenqwelomoya be-47 baya kuqhuba iinqwelomoya ezisuka ngqo / ukuya ePrague. Inkampani yaseJamani i-Eurowings, ilungu leQela leLufthansa, ivula isiseko sayo kwisikhululo seenqwelomoya sasePrague. I-Airbus A319 yayo emibini iya kukhonza unxibelelwano kwiindawo ezili-13 zaseYurophu, kuquka iCanary Islands kunye neBarcelona. I-Ryanair icwangcise unxibelelwano olusuka ePrague ukuya kwizixeko ezingama-26, kubandakanywa iindawo ezidumileyo ezifana neLondon, iKrakow neDublin. Iqela leSmartwings liza kuqhuba uqhakamshelwano kwiindawo eziphantse zibe ngama-20 phantsi kweshedyuli yenqwelomoya yasebusika, njengeCanary Islands, Madeira, Hurghada, Paris and Stockholm. Uqhagamshelo oluthe ngqo kwi-charter yexesha elide ukuya kwiindawo ezingaqhelekanga ezifana neMaldives, iPunta Cana, iMombasa, iCancún kunye neZanzibar nazo ziya kufumaneka ukusuka. IVáclav Havel kwisikhululo senqwelomoya ePrague.
“Kuyasivuyisa ukubukela ukuqaliswa kweendlela ebezisetyenziswa ngaphambili, ukuqaliswa koqhagamshelo kwiindawo ezintsha ekuya kuzo, kunye nokonyuka kwamaza kwiindlela ezikhoyo. Enkosi kule meko yangoku, siphethe abakhweli abangaphezu kwezigidi ezithathu phakathi ku-Okthobha. Sikwanethemba lokuba, ngenxa yoqhagamshelwano olutsha olubonelelwa phantsi kweshedyuli yenqwelomoya yasebusika, inani liya kuqhubeka likhula. Sisekude kumanani abakhweli arekhodiweyo ngo-2019, kodwa ngokwenani leendawo ekubonelelwe kuzo, siyasondela, ”utshilo uJiří Pos, uSihlalo weBhodi yabaLawuli kwisikhululo seenqwelomoya sasePrague, wongeza wathi: “Kwiindawo ezizayo. ngexesha lasebusika, silindele ukwanda komdla wabakhenkethi baseCzech kuhambo oluya kwiindawo ezingaqhelekanga. Siyavuya ukuba bazokwazi ukukhetha kwiinketho ezininzi kwaye bahambe ngokuthe ngqo nangokudluliselwa. ”
Ngokuphinda kuqaliswe ngokuthe ngcembe ukuthuthwa kweenqwelo-moya, unxibelelwano oluye lwaqaliswa ngokutsha lubuyiselwa ePrague. I-British Airways iya, kwakhona, idibanise i-Prague kunye ne-Airport yeSixeko phakathi kweLondon, i-Czech Airlines iya kuvuselela indlela eya e-Copenhagen, i-Ryanair iya kuqalisa kwakhona iinkonzo ezithe ngqo kwi-Barcelona, ​​​​eParis naseManchester, ngelixa i-Jet2.com iya kuphinda iqalise iindiza zayo ukuya eBirmingham, IManchester, iLeeds kunye neNewcastle.